★မြန်မာ့အလင်း★: Ahmadinejad To Obama: Iran Welcomes Change In U.S. – But You Must Allow Investigation Of 9/11
Ahmadinejad To Obama: Iran Welcomes Change In U.S. – But You Must Allow Investigation Of 9/11
မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ နအဖ ထောက်ခံတဲ့သူတွေက နအဖကို သူတော်ကောင်းလို့ ယူဆနေပါတယ်။ ဒီမိုသမားတွေကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သူတော်ကောင်းလို့ယူဆနေပါတယ်။ ဒီလိုထင်မြင်နေတာကလဲ မရင့်ကျက်ပဲ ကလေးဆန်တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတွေက သူတို့ ဘယ်လောက်ပဲ ယုတ်မာနေပါစေ စကားလုံးလှလှလေးတွေပဲပြောကြပါတယ်။ တဖက်သားနည်းနည်းလေးအမှားလုပ်ရင် လူအခွင့်အရေး၊ တရားမျှတမှု စတဲ့စကားလုံးကြီးတွေနဲ့ ကိုင်ပေါက်ပြီး လူတိုင်းကြားအောင် အတင်းပြောကြတယ် မဟုတ်ပါလား။ အထာမနပ်တဲ့သူတွေကတော့ ငါတို့နအဖကတော့ ကောင်းပါတယ်။ ငါတို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကောင်းပါတယ်၊ ငါတို့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့ ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးဖြစ်နေတာပါ။ အခုလည်းကြည့်ပါ အမေရိကန်အစိုးရဟာ 9/11 လူတွေသေခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာ လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းခွင့်မပေးပါဘူး။ ဒီမိုမီဒီယာတွေကလဲ အဲဒီအချက်ကို လူတွေသတိမထားမိအောင် လုပ်ထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အရေးမှာတော့ ဒီမိုအစိုးရတွေနဲ့ ဒီမိုမီဒီယာတွေဟာ သူတော်ကောင်းကြီးများသဖွယ် နာမည်ကောင်းယူနေတာ သတိထားကြည့်ရင်သိကြမှာပါ။ သွေးမတော် သားမစပ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စိုးရိမ်နေကြတာ ဘေးကလူကတောင် သူတို့ကို သနားစိတ်ဝင်မိပါတယ်။ အခုလည်းပဲ အီရန်ဟာ အမေရိကန်ကို 9/11 မှာ လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ (ဒီမိုမီဒီယာတွေမှာတော့ မတင်ပြပါ) တကယ်တော့ အီရန်ကိုယ်တိုင် သူ့နိုင်ငံထဲမှာ ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတာ မဟုတ်ပါလား? နောက်ဆုံး သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ မိုဟာမက်ကိုယ်တိုင် လူသတ်သမား၊ မုဒိမ်းကောင်ပါပဲ။ ကြောင်သူတော်ဆိုတာ နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုသာ ခေါ်ထိုက်ကြာင်းသိစေအပ်ပါတယ်။
Iranian President Mahmoud Ahmadinejad has said that Iran hails fundamental and righteous changes in U.S. policy, and that Iran will be looking into the U.S.'s words and actions.
He said that if the new U.S. administration talks of change, it should end support for Zionists, because they are uncultured, murderers, and forged – and that it should let the Palestinians decide their own fate.
If the change is onlyasuperficial one, in tactics, literature and terminology, its superficiality will be soon made public and nations will resist.
He then addressed U.S. President Obama, saying, "By changing policy we mean you should allow investigations of the agents behind September 11, and you should also pull out your forces from different countries."
He stressed that the agents behind 9/11 had not been discovered, and that the U.S. was not allowing allow any impartial fact-finding committee to investigate the issue, just as it did not allow investigation of the Holocaust.
Source: ISNA, Iran, January 28, 2009
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 5:56 AM